Midowdo xiriirada nuqul on iPhone Si fudud
> Resource > iPhone > Sidee inay la midowdo Xiriirada nuqul on iPhone
Ma suroobi karaa waddo in ay xiriir nuqul midoobeen on iPhone 5? Ka dib markii aan goolka xiriirada aan xoojiyaa in Gmail iyo Muuqaalka in aan iPhone 5, kaliya si aad u ogaato in ay jiraan xiriiro badan oo nuqul on my iPhone 5. Waxaa i dhibayso badan. Fikrad kasta?
Haddii aad isticmaalayso iPhone ah, waxaa jira fursad ah in aad leedahay waxaa laga yaabaa in xiriir nuqul ku yaal. Tani waxay keeni kartaa ka dib marka aad ka Gmail, Muuqaalka wanaajiyo xiriirada, ama aad kaliya badbaadin xiriirada si joogta ah. Sidaas, sida aad u wadi karo xiriirada nuqul ah? Ha welwelin. Maqaalkani waxa uu doonayaa inuu muujinayo somes talooyin ku yaal.
Midowdo ama tirtirto xiriirada nuqul on iPhone
Haddii xiriirada ma badan, waxaad tirtiri kartaa xiriirrada nuqul keligaa aad iPhone. Tubada "Xiriirada" on iPhone. Hoos liiska xiriir si aad u ogaato xiriirrada nuqul in aad rabto in aad tirtirto. Riix "Edit" ee geeska kore ee midig. Hoos ugu dambaysta ee shaashadda. Guji "Delete Xiriirada".
Haddii aad rabto in aad xiri xiriirrada in ay leeyihiin nuqul info, laakiin ma doonayaan in ay tirtirto, oo aad kala socon kartaa this. Ka dib markii laga faaiidaysanayo "Edit", aad ugu rogto karto hoos shaashadda ilaa aad dhexdiinna "lala Cards". Tubada icon ka hor "Link Contact ...". Tani waxay dib ugu liiska xiriirada aad ku keenaa. Haddaba taga oo u ka heli xiriir aad u jeclaan lahaa in la sameeyo link la. Tubada xiriir ah oo guji "Link" ee dhinaca kore ee midig. Markaas, labada xiriir xiran yihiin. Marka aad aragto mid ka mid ah la xiriir, waxaad heli kartaa fududahay in xiriir kale helaan.
Midowdo xiriirada nuqul la barnaamij
Sida user iPhone ee kor ku xusan, xidhiidh badan oo nuqul ku saabsan iPhone? Ma doonaysaa inaad iyaga la macaamiloodo? Haddaba TunesGo Wondershare , si fudud aad ku milmaan karo xiriirada nuqul on iPhone 5, iPhone 4, iPhone 3GS iyo iPhone 4 si fudud oo waxtar leh. Intaa waxaa dheer, waxa keliya oo aan kuu ogolaanaysaa inaad ku milmaan xiriirada badbaadiyey on xasuusta iPhone, laakiin aad ku xoojiya sidii ay ku milmaan xiriirada ka iCloud, Exchange, Yahoo, Gmail iyo xisaab kale.
Download TunesGo Wondershare in ay ku milmaan iPhone nuqul xiriir!
Talaabooyinka inay la midowdo xiriirada nuqul on iPhone
Waxa ugu horeeya ka dib marka aad ka soo dejisan TunesGo Wondershare yahay si loo soo dajiyo iyo waxa maamula aad kombuutarka. Waxaa si buuxda la jaan qaada Windows 8, Windows 7, Windows XP, iyo Windows Vista. Connect aad iPhone la PC via cable USB in iPhone yimaado la. Barnaamijkan ogaan doonaa iPhone si toos ah iyo muujiyaan aad info iPhone uu furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta aadan isku dayi TunesGo Wondershare, fadlan hubi in aad tahay Lugood lagu rakibay on your computer sameeyo. Kaliya la Lugood lagu rakibay on your computer, ku shaqayn doonaa si sax ah.
Tallaabada 2. midowdo xiriirada nuqul
Si aad u saarto koobiyada xiriirada, guji "Xiriirada" in ay leeg- bidix. Markaas suuqa kala xiriiro, wuxuu xaq riix batoonka "De-nuqul" . Markaas, TunesGo ogaan doonaa xiriir leeyihiin nuqul ka dib markii aad ka dooran xisaab iyo xusuusta telefoonka. Kasta oo xiriir nuqul la magac la mid ah, lambarka telefoonka ama email ka dhex muuqan doonaa ka midowdo Xiriirada nuqul uu furmo suuqa. Dooro nooca kulan. Waxaad dooran kartaa in aad u dhigma xiriir sax ah ama u dhigma xiriirada koox, ku odhan lambarka taleefanka, email ama magaca. Markaas, guji "midowdo soo xulay" in ay ku milmaan oo dhan xiriirada nuqul ama koobi la soo xulay ee xiriirada.
Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, barnaamijka ayaa sidoo kale dib u soo kicin doonaa xiriir si toos ah haddii aad u baahan tahay in mustaqbalka. Xusuusnow in aan barkinta aad iPhone inta ay socoto.
In labaad ah, habka la dhammeeyo. Ka dibna waxaad arki kartaa in ay jiraan wax xiriir nuqul ku saabsan iPhone mar dambe. Oo weliba waxaa ku biirtay xiriirada ka iPhone, Wondershare TunesGo oggolaanaysa in aad maamulato music, sawiro, iyo videos sidoo. Download TunesGo si aad u aragto sida ay u noloshaada mobile badan ka fudud oo ka cajiib ah ka dhigaysa.
Daawo tutorial video for sida ay u midowdo xiriirada nuqul on iPhone